Easy Japanese in Burmese - Lesson 8 | NHK WORLD RADIO JAPAN
NHK WORLD > လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာ > မြန်မာဘာသာ Top > သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်များ > သင်ခန်းစာ 8
အန်းနာဟာတက္ကသိုလ်မှာပါမောက္ခ ဆူဇူကီးရဲ့ ဂျပန်စာအတန်း တက်နေပါတယ်။
သင်ခန်းစာ 8 ၁ဝ မိနစ်
သင်ခန်းစာကို download လုပ်ယူရန် 8
MÔICHIDO ONEGAI SHIMASU
試験によく出ます。 အားလုံးပဲ ဒါကိုမှတ်ထားပါ။ စာမေးပွဲ မှာခဏခဏပါတယ်။
MINASAN, KORE O OBOETE KUDASAI.
SHIKEN NI YOKU DEMASU.
အားလုံးပဲ ဒါကိုမှတ်ထားပါ။ စာမေးပွဲ မှာခဏခဏပါတယ်။
先生、もう一度お願いします。 ဆရာ ... နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ပြောပါဦးရှင်။
SENSEI, MÔICHIDO ONEGAI SHIMASU.
ဆရာ ... နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ပြောပါဦးရှင်။
ကြိယာတွေကိုဝါကျရဲ့ အလယ်ပိုင်းမှာ ထည့်သုံးမယ်ဆိုရင် တစ်နည်းအားဖြင့် သူ့ရဲ့နောက်မှာ အခြား စကားလုံးတွေကိုထပ် ထည့်သုံးမယ်ဆိုရင် ကြိယာတွေရဲ့ ပုံစံကို- TE ပုံစံ ပြောင်းပြီး သုံးရပါတယ်။ဒါကို TE-ပုံစံကြိယာ လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဥပမာ - OBOEMASU (မှတ်တယ်၊ မှတ်မယ်) -- OBOETE ဖြစ်သွားပါတယ်။
-လေ့လာသင်ကြားရေး အထောက်အကူပစ္စည်းများ- စာမျက်နှာကို ကျေးဇူးပြုပြီးသွားရောက်လေ့လာပါ။
TE-ပုံစံကြိယာ + KUDASAI
အတန်းတင်စာမေးပွဲအပြင် စာမေးပွဲအသေးစား လေးတွေလည်း ရှိတယ်လို့ကြားတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ်စာမေးပွဲက ဘယ်တော့လည်းမသိဘူး။ ရင်တွေခုန်လိုက်တာ။ DOKI DOKI။
သင်ခန်းစာ7အီကလဲမုန့် ရှိပါသလား။